BURMA: [Big Brothers & Sisters] ရှမ်းပြည်ရှိ စစ်တပ်အတွက် သိမ်းမြေများ လျော်ကြေးပေး
[Big Brothers & Sisters] ရှမ်းပြည်ရှိ စစ်တပ်အတွက် သိမ်းမြေများ လျော်ကြေးပေး
Burma Freedom posted in Big Brothers & Sisters
Burma Freedom 02 July 23:31
ရှမ်းပြည်ရှိ စစ်တပ်အတွက် သိမ်းမြေများ လျော်ကြေးပေး
ဟိန်းသူ Saturday, 02 July 2011 12:26 .ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲတွင် စစ်တပ်အတွက် မြေဧက ရာချီ သိမ်းခဲ့သည့်ကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာက ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေး သည့်အတွက် မြေသိမ်းခံဒေသခံများနှင့် ပြေလည်မှုရရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
"ရွာသားတွေကို ပိုက်ဆံနဲ့မြေကွက် အစားပြန်ပေးတယ်။ အပြည့်အ၀ ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ရွာသားတွေကတော့ ကျေ နပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်"ဟု အဆိုပါအမှုအား လိုက်လံ ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ စိုင်းသူရိန်ဦးက ပြောသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် တောင်ကြီးနှင့် ကျိုင်းတုံဒေသအကြား ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲရှိ မြေဧက ၁၀၀ ကျော်ကို မြေပိုင်ရှင် ၄၀ ခန့်ထံမှ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလက သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအထဲမှ လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သူများရှိသော်လည်း မကျေနပ်သည့်ရွာသား ၇ ဦးက ရှမ်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ထံ တိုင်တန်းခဲ့ကြ သည်။
တိုင်တန်းသည့် ရွာသား ၇ ဦးအပါအ၀င် လက်မှတ်မထိုးပေးသော မြေပိုင်ရှင်များကို သိမ်းယူထားသည့် မြေ၏ ထက်ဝက် အတွက် အခြားနေရာမှ မြေအစားပြန်ပေးကြောင်း၊ ကျန်သိမ်းယူမြေအတွက် တဧက လျှင် ကျပ် တသိန်းခွဲနှုန်းဖြင့် လျော်ကြေး ပေးကြောင်း သိရသည်။
ခိုလမ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက မြေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းကာ မြေကွက်များကို ပြန်လည် နေရာချထားပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
"မြို့ထဲမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဓိက ကတော့ ခြံလုပ်ငန်း ပြန်လုပ်လို့ရတဲ့ နေရာမျိုးပြန်ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်လိုက်တာပါ"ဟု ခိုလမ်ရွာ သား တဦးက ပြောသည်။
မြေသိမ်းစဉ်က လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သော မြေပိုင်ရှင် ၁၃ ဦးထဲမှ တချို့မှာ သိမ်းယူခံ မြေတဧကအတွက် ကျပ် တသိန်းခွဲ လျော်ကြေးငွေ ရရှိသော်လည်း တချို့မှာ လျော်ကြေးငွေ မရရှိဘဲ ပေ ၄၀ x ၆၀ မြေကွက်များသာ အစားထိုး ရရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ သိမ်းယူ ထားသည့် မြေများထဲတွင် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကျော် ပေါက်ဈေးရှိသည့် လိမ္မော်ခြံများလည်း ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
လက်မှတ်ထိုးပြီးသူများကို အခြားသူများနည်းတူ လျော်ကြေးထပ်ပေးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ယခုအချိန်ထိ အပြီးသတ် လျော်ကြေး မရသေးသူ အနည်းငယ်ကျန်သေးကြောင်း လိုက်လံ ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ စိုင်းသူရိန်ဦးက ပြောသည်။
Posted by Freedom Burma at 15:32
[Freedom Burma] New photo
[Big Brothers & Sisters] New doc: ၅-၇-၁၁ နေ့ မနက် ...
[လွပ်လပ်ခြင်း] New doc: ၅-၇-၁၁ နေ့မနက်သတင်းနှင့်ဆေ...
[Freedom Burma] Check this out ! Click the link an...
[လွပ်လပ်ခြင်း] Is there anyone who has case file, ...
[Freedom from Fear 2] ရေမြင့်လေသောအခါ
[Big Brothers & Sisters] ရေမြင့်လေသောအခါ
[Big Brothers & Sisters] မှတ်သားသင့် လေ့လာဖတ်ရှုသင...
[လွပ်လပ်ခြင်း] မှတ်သားသင့် လေ့လာဖတ်ရှုသင့်ကြသည်။
[Information & Technology Network] Is there anyone...
[Aung San Suu Kyi] Is there anyone who has case fi...
[Freedom from Fear 2] သူခိုးဓါးရိုးကမ်းတဲ့ သစ္စာဖေါ...
[Aung San Suu Kyi] “Ce sont nos premières vacances...
[Information & Technology Network] New link
[လွပ်လပ်ခြင်း] ကာတွန်းအမည်က တရားဥပဒေနဲ့အညီတဲ့နော် ...
[Freedom from Fear 2] ဒီမိုလူသား
[လွပ်လပ်ခြင်း] “ သံတိုင်နောက်က မှတ်တမ်းများ ” ထွက်...
[Information & Technology Network] 3.2is out
[Freedom Burma] အားလုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ . . .
[လွပ်လပ်ခြင်း] မင်္ဂလာပါ... ကောင်းသော နေ့သစ်ကို မွေး...
[Big Brothers & Sisters] New doc: ဖိနပ်ပုံပြင်
" မြန် မာ တိုင်း ရင်း သူ လေး တ ဦး ဧ။် ကြေ ကွဲ ၀မ်...
[လွပ်လပ်ခြင်း] လူသည် နေ့ မှာထက် ညမှာ
[လွပ်လပ်ခြင်း] New doc: လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်(သမ...
[လွပ်လပ်ခြင်း] New doc: အကောင်းမြင်သမားရဲ့အမှန် ...
[လွပ်လပ်ခြင်း] New doc: စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ဘဝ
[Big Brothers & Sisters] အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒုတိယ သံမ...
[Big Brothers & Sisters] ဝမ်းတွင်းစုန်း - ကိုသျှပ်...
[လွပ်လပ်ခြင်း] ဝမ်းတွင်းစုန်း - ကိုသျှပ် (ကန့်ဘလူ)...
[Freedom from Fear 2] အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒုတိယ သံမှူး...
[Freedom Burma] အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒုတိယ သံမှူး ဦးကေ...
[Freedom Burma] ပုဂံမြို့က ဒေါ်စုကို စောင့်မျှော်လျ...
[Aung San Suu Kyi] ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားပြီး...
[Information & Technology Network] ipad2မှာ gtal...
[Big Brothers & Sisters] ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားပြီး...
[Freedom from Fear 2] ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားပြီး......
[Freedom Burma] ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားပြီး...
[Big Brothers & Sisters] *တပ်မတော်သည်တိုင်းပြည်အတွ...
[လွပ်လပ်ခြင်း] ကုလသမဂ္ဂ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ လူကုန်က...
[လွပ်လပ်ခြင်း] မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ က...
[လွပ်လပ်ခြင်း] Ye Thurein Min
[Big Brothers & Sisters] New doc: ငွေကြေးလွတ်လပ်မှ...
[လွပ်လပ်ခြင်း] Aung Min
[လွပ်လပ်ခြင်း] ၀ါရှင်တန်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံမှူးကြီး.....
[Big Brothers & Sisters] New doc: လမ်းခင်းကျောက်
[Freedom Burma] ၀ါရှင်တန်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံမှူးကြီး....
[Big Brothers & Sisters] New doc: သားကောင်များ
[Big Brothers & Sisters] New doc: တကယ့် ပညာတတ်ဖြစ်...
[Big Brothers & Sisters] "ဧရာဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်ေ...
[Freedom from Fear 2] ဧရာဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်တောင်...
[Information & Technology Network] cookiejacking
[လွပ်လပ်ခြင်း] မွန်ကိုယ်စားလှယ် တယောက်ရဲ့ ထိုင်းရေ...
[Big Brothers & Sisters] Thailand....ရွေးကောက်ပွဲ....
[Freedom from Fear 2] စီးပွားရေး ဦးတည်ချက် (၄)ရပ်...
[Freedom from Fear 2] ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း အာလာဒင် ...
[Freedom Burma] Ye Thurein Min
[Freedom Burma] သူငယ်နာ မစင်တဲ့ ဖိုဝါဒီတွေ မြန်မာန...
[လွပ်လပ်ခြင်း] Please support Families ofBurma Pol...
[လွပ်လပ်ခြင်း] Burma prisons one of the world wors...
[Freedom Burma] it would be great, if u guys could...
[Aung San Suu Kyi] Please support Burma Democracy!...
[Aung San Suu Kyi] ထိုင်းနိူင်ငံရွေးကောက်ပွဲ
[Information & Technology Network] ဤလောက၌ မမှားသော...
[Big Brothers & Sisters] New doc: အဘိဓမ္မာ ရှင်းစရာ...
[Big Brothers & Sisters] New doc: ဗဆွေလေး (သို့မဟု...
[Freedom from Fear 2] အပယ်ဘေးမှလွတ်ခဲ့သောဆောင်းပါး...
[Freedom Burma] http://www.facebook.com/video/vide...
[ချစ်တေးသီ] ချစ်တေးသီမှာ စုံတွဲဘယ်နှစ်တွဲရှိပါသနည်...
[လွပ်လပ်ခြင်း] Please signapetition to support A...
[Information & Technology Network] Please signa...
[Information & Technology Network] You should play...
[Big Brothers & Sisters] မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေတို့.........
[Aung San Suu Kyi] မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေတို့.........
[Freedom from Fear 2] မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေတို့............
[Freedom Burma] မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေတို့.........
[Aung San Suu Kyi] agony